यहि शुक्रबार अर्थात् बैशाख २८ बाट प्रदर्शनमा आउने ‘लम्फू’ हेर्ने पर्ने यस्तो छ कारण ! | Celebrity Nepal
यहि शुक्रबार अर्थात् बैशाख २८ बाट प्रदर्शनमा आउने ‘लम्फू’ हेर्ने पर्ने यस्तो छ कारण !
यतिबेला चर्चामा रहेको नेपाली चलचित्र ‘लम्फू’ यहि शुक्रबार देशभर प्रदर्शन हुँदैछ । एक युवाको जीवनमा अनायासै आईपर्ने उतार-चढावहरुमा आधारित यो चलचित्रमा समयलाई शत्रु बनाईएको छ । आफ्नो जीवनमा हरेक दिन आईपर्ने सबै समस्याहरुलाई सहजै स्विकार गर्न सक्ने एक युवाले चलचित्रलाई शुरु देखी अन्तिमसम्म बोकेको बताईएको छ । चलचित्रमा प्रमूख भुमिका नव-नायक कबिर खड्काले निभाएका छन् । उनका साथमा सलोन बस्नेत पनि छन् । कबिर र सलोनका अलावा मरिष्का पोखरेल, चाँदनी शर्मा, सञ्जीत भण्डारी, आयान खड्का, कुशाग्र भट्टराई, कुशुम श्रेष्ठ (तरकारीवाली) लगायतको अभिनय रहेको छ ।
यतिबेला दर्शकको मनमा ‘लम्फू’ चलचित्र किन हेर्ने त भन्ने जिज्ञासा रहेको हुनसक्छ । चलचित्रका निर्देशक गोपालचन्द्र लामिछानेले यो चलचित्र हेर्नैपर्ने केहि कारणहरु खुलाएका छन् । ‘यो चलचित्रमा आफ्नोपन छ, चरित्र चित्रणमा पनि पूर्णतया आफ्नोपन छ । ‘लम्फू’ले पूर्ण मनोरञ्जन दिन्छ’ लामिछाने भन्छन्, ‘चलचित्र हेर्नुको मूल ध्येय मनोरञ्जन लिनु हुन्छ, हामीले बनाउनुको अर्थ मनोरञ्जन दिनु हुन्छ । ‘लम्फू’मा ति तत्वहरुको पूर्ण प्याकेज छ’ ।
निर्देशक लामिछानेका अनुसार अभिनेता सलोन बस्नेतको फरक भूमिका छ । ‘सलोनका फ्यानले पुन: एकपटक सलोनलाई नयाँ परिचयमा पाउनेछन्’ उनले भने । यसै चलचित्रबाट नेपाली चलचित्रमा आएका कबिर खड्काले निकै खारिएको अभिनेताले जसरी नै काम गरेको लामिछानेको भनाई छ । चलचित्र क्षेत्रमा कबिरले निकै राम्रो सम्भावना बोकेको उनको दावी छ ।
कबिरको अभिनय प्रतिक्षा गर्नेहरुले पनि यो चलचित्र हेर्नैपर्ने निर्देशक लामिछानेले बताए । चलचित्रमा रहेका सम्पूर्ण कलाकारहरुको अभिनय उत्तिकै शसक्त रहेको लामिछानेको दावी छ । निर्माता भन्छन्, ‘प्रतिक्षित नहोला तर सम्भावना बोकेको छ’यो चलचित्रलाई पपुलर मल्टीमिडियाको लागी शक्तिबल्दभ घोरासैनीले निर्माण गरेका हुन् । निर्माता घोरासैनीले यो चलचित्रबाट आफुले विशुद्द मनोरञ्जन दिने उद्देश्य राखेको बताएका छन् । उनि भन्छन्, ‘लम्फू प्रतिक्षित चलचित्र नहोला तर निकै राम्रो सम्भावना बोकेको छ । यसले पूर्ण मनोरञ्जन दिनेछ’ । निर्माता घोरासैनीका अनुसार चलचित्र हेरेपछि दर्शक निराश हुनुपर्ने छैन ।
कन्डक्टरबाट कसरि साउथका स्टार बने रजनीकान्त ?
नेपाली ठिटोज संग प्रियंकाको ठुम्का (भिडियो)